२०५६ मा मैले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रवेश गरें । म पाँच महिना २४ दिन विदेश पृष्ठको काममा लागे । त्यसपछिको करिब साढे चार वर्ष रात्री डेस्क । २०६० चैत १ देखि औपचारिक रुपमा बालकोसेली ‘कोपिला’ का लागि खटिएँ । मलाई छुट्टै कोठा र टेबुल दिइएको थियो । यसका लागि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, म टेबुलको शौखिन हुँ । Read More »
संसारभर नेपाली खोज्दै
कति देशमा नेपाली वा नेपाली-भाषी होलान् ? यो प्रश्न सबका मनमा जाग्ने प्रश्न हो । जवाफ सजिलो छैन । समाचारहरू हेरेर मात्र यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली नपुगेका विश्वमा अब देशहरू छैनन् । गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) का गतिविधि र सम्पर्कले नेपालबाट परदेशिएका वा काममा जाने गरेका नेपाली सबैजसो देशमा पुगेको प्रष्ट्याउँछ । एनआरएनएको ६ दर्जन देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल) बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालबाहिर रहेका नेपाली वा नेपाली-भाषीको ठ्याक्कै संख्या पाउन कठिन छ ।
भाषाको कुरा गर्दा विश्वमा बोलिने भाषाहरुको सूचीमा नेपाली भाषा बोल्नेहरु करिब ६० औंमा पर्छौं । खासगरी चीनमा बोलिने मन्डारिन बोल्ने मानिस सबभन्दा बढी छन् । त्यसपछि विश्वका मुख्य भाषाका सूचीमा स्पेनिश, अंग्रेजी, बंगाली, हिन्दी आदि छन् ।
कहाँ कहाँ नेपाली ?
सधैंका लागि गएका र कामका लागि गएका नेपालीहरूको सन्दर्भ यहाँ आउन सक्छ । नेपाली-भाषा बोल्नेहरू नेपालबाहेक मुख्य रूपमा भारत, भूटान, बर्मा (म्यान्मा), हङकङ, बेलायत आदि देशमा छन् ।
अमेरिकामा नेपाली-भाषा बोल्नेहरू करिब ३ लाख भएका छन् । अमेरिकामा ८२ हजार नेपाली-भाषी भूटानी स्थायी रूपका लागि बस्न थाल्नु भएको छ । अमेरिकालगायत विश्वका अरू ८ मुलुकमा अस्ट्रेलिया, क्या नाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, र बेलायत गरी ९३ हजारभन्दा बढी नेपाली-भाषी भूटानीलाई स्थायी रूपमा पुनर्वास गराइएको छ । सन् २०१० को अमेरिकी जनगणनाले ५९ हजार ४ सय ९० मात्र नेपाली देखाए पनि दुई लाख नेपाली भएको अनुमान गरिन्छ ।
नेपाली-भाषीहरू क्यानडा, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्वीडेन, न्युजील्यान्ड, बेल्जियम, जापान, चीन आदि देशमा पनि छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवारले स्थायी बसोबास गर्न पाए । बेलायतबाहेक क्यानडा र अष्ट्रेलियाले धेरै नेपालीलाई तानेको छ । Read More »
प्रश्न उठ्छ, भूटानी पुनर्स्थापनाको संख्यामा आइओएम (International Organization for Migration; IOM) कहाँनेर चिप्लिएको हुनसक्छ ? Read More »
फेरि तिमीहरु कहाँ हो जाने भन्थ्यो, नातिले । पुग्यौं त ? बाटामा खायौं होला की ? बसमा गयौं की हिंडेर गयौं ? बस भन्दा एउटा कुरा सम्झे, सानो छादा तलाईं बस चढ्नु हुन्थेन । उल्टी गर्थीस् । उस बेला प्लास्टिकका झोला पाइँदैन थे । अरु केही बोक्न पनि सुद्धि-बुद्धिले कहाँ काम गर्थ्यो र ? तलाईं बान्ता भएपछि मलाई पनि हुन्थ्यो । बान्ताले आमा-छोरा आलस-तालस हुन्थ्यौं । ङ्यास्याक्क परेको अनुहार लिएर मामाघर पुग्थ्यौं । हजुरीले तात्तातो काँडा-पानी ख्वाएपछि यसो सास आउँथ्यो । काँडा-पानी भन्दा आज मलाई निकै भोक लागेको छ । आज बिहानैदेखि कसैले खान दिएका छैनन् । चामल सकियो, दाल पनि छैन भनेर हल्ला-खल्ला गरेको सुन्दै थिएँ, होला पनि । यत्रा मान्छेलाई के ले पो पुग्थ्यो र ? यी यस्तै हुन् । ठट्टै पो हो की पनि भन्ठान्छु । कहिले ठट्टा पनि गर्छन् । Read More »
अमेरिकी तिहारलाई सिस्नुपानी !
आज काग भेटिएन । यसै भात छुट्याएर आफूले खानु सिवायको विकल्प रहेन । कि त आफैं ‘काग काग’ भनेर कराएर कागको भाग पनि हसुर्नु पर्ने भो ! अमेरिकामा पनि काग पाइने रहेछन्, तर यो हिउँ पर्ने राज्यतिर जाडो सुरु भएर होला, खै देखिएनन् । अमेरिकामा पूर्व, पश्चिम, फ्लोरिडा र दक्षीणमा काग पाइँदा रहेछन् । तीनको नाम रहेछ, पूर्वी काग, पश्चिमी काग, फ्लोरिडा काग र दक्षिणी काग । ती पनि ‘वेस्ट नाइल भाइरस’ का शिकार हुँदा रहेछन् । जे भए पनि ‘कागभन्दा कोइली बाठो, कोइलीभन्दा अमेरिकाका सब मान्छे बाठो’ भन्ने नयाँ उखानका सामु ‘काग’को पूजा किन पो गर्नु ?
हाम्रा प्रतिभाले सीमा काटेको यो नयाँ भने होइन । नेपाली गायक, संगीतले फरक किसिमले भारतमा काम गरेको इतिहास छ । उसबेला रोजीरोटीका लागि भारत जाने क्रम विस्तारै प्रतिभा देखाउनेतर्फ मोडिएको पाइन्छ । Read More »
उता ‘क्यान्डल लाइट डिनर’मा मान्छे त्यसै लोभिएका होइन रहेछन् । बत्तीमा झुमिएका पुतलीहरूझैं । कति ठूलो महत्व ! Read More »
शनिबार बिहान । घरनजिकको हाइवेमा गाडीका आवाज विस्तारै बढ्छन् । त्यही सुन्दै म ब्युँझन्छु । घाम उकालो लाग्दै गर्दा अरू आवाजहरू हाबी हुन्छन् । घरछेउको सडकमा पनि गाडी बढ्छन् । गाडीहरू नजिकै कतै गएका होलान् वा हाइवेमा । धेरै मानिसहरू शनिबार बिहान उत्तरतिर लाग्छन् । बिदा मनाउने सुरमा केही मानिसहरू शुक्रबार निस्कन्छन् । नभ्याउनेहरू शनिबार बिहान एकोहोरो उत्तरतर्फ लाग्छन् । रात बिताउँछन् । कोही दिन मात्र पनि बिताउँछन् । यो गर्मीको मौसम हो । Read More »